Thu, Apr 19, 2018 | 19:31:21 NST
परदेशमा न बस्न सकिने अवस्था छ नत चटक्कै छोडेर हिड्ने दैनिक १५ सयको हाराहारीमा परिश्रमी युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देशमा मिठो सपना, उत्साह र केही कमाउने लालशामा लाम लागिरहेका छन् । तर अपबाद बाहेक धेरै नेपालीको कथा उस्तै छ र रहिरहने पनि छ सायद । यसका कारण अनेक होलान सम्बन्धितले नै खोज्ला । म झण्डै ४ वर्ष देखि युएईमा छु । यहाँ देखेका दुखले भोगाइलाई छाँया पारिरहेको छ । न्यूनतम भन्दा पनि न्यून तलबमा, तोकिएको भन्दा धेरै समय काम गर्नु परिरहेको, भनेको समयमा त छोडौ अत्यावश्यक र बिरामी हुँदा सम्मपनि बिदा नपाएको, पानाडोल खादै काममा जोतिएको प्रशस्तै ... पुरा पढ्नुहोस
विदेशमा पनि दलालले छाडेनन् आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि म मलेसिया आएँ । विदेशमा पैसा कमाएर घरपरिवार चलाउन सजिलो होला भन्ने लागेको थियो । तर विदेश हिँड्ने बाटोमा त गौंडा गौंडामा काँडाको बार लगाइएको हुँदोरहेछ । ती बार पन्छाएर अघि बढ्न पैसाबाहेक अरु कुराले नहुने रहेछ । विदेश आउने सोचेको दिन देखि नै दलाललाई पाल्न थालेको अहिले विदेशमा रहँदा पनि चलिरहेको छ । म जस्तै हजारौं नेपालीको अवस्था उस्तै छ । एकजना कामदारले विदेश जाने सोचले झोला बोकेको दिन देखि उसले दलाल पाल्नुपर्छ । त्यहि कारण मैले जीवनमा कहिल्यै नभोगेको दुःख भोग्दैछ... पुरा पढ्नुहोस
यसरी तड्पिएर म कहिले सम्म विदेशमा बसौं ? (श्रीमतीलाई पत्र) प्यारी श्रीमती, चोखो माया तथा मीठो सम्झना । यी अक्षरहरु कोर्दासम्म म यहाँ कुशल,म‌गलै छु । त्यहाँ तिमीलाई पनि सदैब सुख, शान्ति र सन्तोष मिलोस् भनि भीत्रि मनदेखि परमात्मासँग प्रार्थना गरिरहेको छु । संचारमाध्यमहरु सहज र सरल रूपमा उपलब्ध भइरहेको अत्याधुनिक युगमा आज अचानक तिमीलाई चिठ्ठी लेख्ने तीब्र इच्छा जाग्यो । खै कुन्नी किन हो ? स्काइपमा जतिबेर बोलेपनि बोल्नै पर्ने खाँटीकुरा बोल्दै बोलिएनझैँ लाग्छ । खोल्नै पर्ने मनको गाँठो खोल्दै खोलिएनझैँ लाग्छ । फेसबुकमा च्याट् गरेर वा स्काइपमा भिडीयो ह... पुरा पढ्नुहोस
देशमा वातावरण बने कोरियाको लाख छाडेर फर्किन्छौं मेरो घर डडेलधुरा हो । म रोजगारीको शिलशिलामा कोरियाकोमा कार्यरत छु । देशमा पर्याप्त रोजगारका अबसरहरु प्राप्त नहुदा म जस्तै हजारौं युवा खाडीलगायत अन्य श्रम मुलुकमा गइरहेका छन् । भौतिक सुःख सुबिधा र सम्पन्न जिबन शैली भएको अमेरिका युरोपसँगै अत्यन्त कस्टकर श्रम असुरक्षा न्यून ज्याला भएको मलेसियासम्म जानेको तछाड्मछाड नै छ र त्यहाँ नेपालीको संख्या पनि उलेख्य मात्रामा छन् । दक्षिण कोरियामा भने रोजगारी गर्ने धेरै नेपालीको रहर भएपनि चाहे अनुसार माग जाँदैन । कोरियामा अन्य देशको जस्तो भेद्भाब छैन र कानूनि स... पुरा पढ्नुहोस
निःशुल्क लैजाने कम्पनीमा काम र कमाई राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा वास्तविक होइन् विदेश जाने कामदारको अभिभावक मानिने वैदेशिक रोजगार विभाग यतिखेर निकै चर्चामा छ । देशभरी छरिएर रहेका म्यानपावरलाई अनुगमन गर्ने र कामदारको हकहित संरक्षण गर्ने संस्था नै विवादित बन्यो । विभागले हिजोआज न कान सुन्छ, न त आँखा नै देख्छ । मलेसियासँगै कुवेत, बहराइन, साउदी, कतारलगायतका खाडी मुलुकमा सुख पाउने झिनो आशामा लाखौं रुपैयाँ तिरेर हजार जाने नेपाली कामदार आफ्नै देशबाट बेचिएको पत्तै नहुँदो रहेछ । विदेशिनु रहर नभई हाम्रो बाध्यता हो । रोजगारीका लागि जान राम्रो म्यानपावर खोज्ने भन्दा भन्दै ... पुरा पढ्नुहोस
अर्काकाे देश बनाउने रहर हैन, अवसर पाए नेपाल फर्किन्छाै‌ देशमा राजनीतिक दल र उच्च तहका निकाय वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा मक्ख छन् । अझ यसो भनौं देशनै यसैले चलिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी नहुदा आज देशमा चरम बेरोजगारी सिर्जना भएको छ । लाखौं युवा विदेशको भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । आफ्नै देशमा अवसर नदिँदा अन्य देश बनाउन बाध्य बनाइएको छ । देशमा महँगिले टिक्न सक्ने अवस्था छैन् भने, विदेशमा भोग्ने दुःख झनै कहालि लाग्दो छ । विदेशमा अप्ठेरो पर्दा दुःखमा साथ दिन खाेलिएका दूतावास नाम मात्रका छन् । वैदेशिक रोजगारले परिवारबाट ट... पुरा पढ्नुहोस
मन भए परदेशबाटै सहयोग गर्न सकिन्छ मेरो घर खोटाङको नुनथला हो । रेडियोमा बोलेर मात्रै जीवन चल्ला जस्तो लागेन । सामुदायिक रेडियो हलेसी एफएम छाडेर मलेसियाको रोजगारी रोजें । रेडियोमा काम गर्दा नाम भएपनि आवश्यक दाम थिएन । मेरी आमाको खुट्टाको नसामा समस्या थियो । आमाको उपचारका लागि खर्च जुटाउनु पर्ने भएकाले पनि मैले वैदेशिक रोजगारको विकल्प देखिन । अहिले म सेलेङगर राज्यको बातुकेवस्थित क्यान जो क्या फ्याक्ट्रिमा रेडियो जीवनको मिठा पलहरु सम्झदै काम गरिरहेको छु । अहिले आमाको औषधी खान नियमित पैसा जुटाउन सकेको छु । अहिले आमाको दैनिकिपनि औषधी... पुरा पढ्नुहोस
विदेश भनेपछि धेरै बुझ्न खोज्दैनौं, नबुझी जानु नै गल्ती हुँदो रहेछ मेरो नाम विष्णु यादव हो । घर नवलपरासीको सुक्रौली–२ मा पर्छ । म रोजगारीका लागि मलेसिया गएको थिएँ । म काठमाडौं पुग्दा भोजबहादुरलाई भेटें । उसले मलाई म्यानपावरको बासु भन्ने मान्छेसित भेट गरायो । बासुले सुरुमा सेक्युरिटी गार्डमा हो काम ठिक छ भन्यो । त्यसैले जान राजी भएँ । तर पछि सेक्युरिटी गार्डमा मिलेन, रेष्टुरेण्टमा जानु भन्यो । काम नै त हो भन्ने लागेर हुन्छ भनें । त्यसका लागि एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिरें । रेष्टुरेण्टमा काम गर्न भनेर मलेसिया त पुगें तर काम त रेष्टुरेण्टमा होइन बिस्कुट फ्या... पुरा पढ्नुहोस
आफू जाने देशका बारेमा पहिलै थाहा पाएको भए जेल बस्नु पर्दैनथ्यो गाउँका धेरै जना विदेश जाँदै थिए । उनीहरुले धेरेथोर कमाइरहेका पनि थिए । म पनि केही कमाउन सकिन्छ कि भनेर एक वर्ष अघि मलेसिया गएँ । नेपालबाट म्यानपावरले मलाई सुपरमार्केटको काम भनेर लगेको थियो । त्यहाँ पुगिसकेपछि मैले होण्डा कम्पनीमा काम गर्नुपर्यो । नेपालमा भनिएको भन्दा फरक काम गर्नुपरे पछि ठगिएछु भन्ने लागेको थियो । तर पनि विदेश पुगिसकेपछि काम त गर्नै पर्‍यो भनेर गरिरहेको थिएँ । काम गर्न थालेको तीन महिना भएको थियो । काम गर्ने अनुमती अर्थात वर्क परमिट पाएको थिइन् । त्यसै क्रममा एक दिन त्यह... पुरा पढ्नुहोस
सडकदेखि परदेश र उद्धारसम्मको यात्रा....... मेरो नाम रमेश वैदवार हो । मेरो घर पाल्पाको पिपलडाँडा २ हो । म अहिले ४७ वर्षको भएँ । २०४७ सालमा पाल्पाबाटै एसएलसी पास गरेपछि म बुटवल बस्न थालें । सहरमा बस्दा खर्चबढि नै हुन्छ । मैले बुटवल बस्दा गाडीको कन्ट्याक्टरमा काम सुरु गरें । मेरो दैनिकी गुल्मी–काठमाडौं बसमा सुरु भयो । कमाइ राम्रै भएपनि गाडीभा हुईकिँदा–हुईंकिदा मलाई विदेशको हावाले छोईसकेको थियो । एक पटक विदेश गएरै छोड्ने धोको थियो । मैले नेपालको कमाई र परिवारलाई छाडेर मलेसिया जाने निधो गरे । २०५८ सालमा मैले मलेसियाका लागि ... पुरा पढ्नुहोस
मलेसियाको रोजगारी त बन्द भएकै राम्रो कृषि पेसामा आश्रित हामी नेपाली छिटै सम्पन्न सुखी र अरु जागिरे सरहको हैसियतमा पुग्न आतुर भएर आफ्नो देशको काम व्यवसाय छाडेर विदेशिएका छाै‌ । म पनि त्यस्तै हुँ । मेरो घर झापाको गौरादह हो । मेनपावरका दलाले सजिलो काम, बस्ने, मेडिकल, इन्सुरेन्स लगायत सुबिधा सहित ५० हजार देखि ७० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन्छ भनेपछि मलेसिया आएँ । एग्रिमेन्ट गरियो दैनिक ८ घण्टा २६ दिनको ९ सय रिङगेट अनि ओभरटाइम । त्यो भन्दा बाहेक आइतबारको दोब्बर र विदाको दिनको तेब्बर हिसाबमा पाउने भएपछि श्रम स्वीकृत गरेर आएकोे थि... पुरा पढ्नुहोस
परदेशीलाई नेपाल र नेपालीको चिन्ता लाग्छ, देश चलाउनेलाई किन नलागेको होला ? रोजगारीका लागि कुवेत राम्रो गन्तव्य मानिन्छ । यहाँ विभिन्न ८० हजार भन्दा धेरै नेपाली कामदार कार्यरत छन । यी मध्ये ४० प्रतिशत घरेलु महिला कामदार छन । अरु अन्य क्षेत्रमा काम गर्छन । अरु देशको तुलनामा नेपाली कामदारको संख्या कम भएपनि नेपाली संघसंस्थाका संख्या भने धेरै छ । अहिले कुवेतमा ६० वटा भन्दा धेरै नेपाली संघसंस्था छन । तर यी मध्ये थोरै संख्यामा मात्रै नेपाली संघसंस्था सक्रिय छन । संस्था सक्रिय हुनका लागि सदस्यहरु पनि सक्रिय हुनुपर्छ । हुन त विदेशमा आउनेको सपना भनेको श्रम बेचेर पैसा कमा... पुरा पढ्नुहोस
​मलेसियामा काम नपाएर फर्कियौँ मेरो घर पाल्पा मस्याम हो । काठमाडौंको सामाखुसी चोकनजिक रहेको स्वीफ्ट लिंक म्यानपावरबाट म लगायत तीन जना मलेसिया पुगेका थियौं । हामी आएको ८५ दिन भएको थियो । तर हामीलाई १०/१५ दिन मात्रै काम दिएर कम्पनीले निकाल्यो । त्यसपछि हामी अलपत्र पयौं । म्यानपावरले भने अनुसारको काम पनि दिएको थिएन । म्यानपावर कम्पनीलाई एक सयपटक भदा बढि फोन गर्यौं तर फोन उठाएन । हामीले कि अर्को काम दे कि नेपाल फर्काउनु भन्दा पनि मानेन । हामी कष्टले आफ्नै प्रयासले नेपाल फर्किन सफल भयौं । त्यसपछि म लगायत सिन्धुलीका दुर्गा बिक र मु... पुरा पढ्नुहोस
​दलालले खाए कमाइजति, कसरी बनाउनु घर ? घर दोलखाको काटाकुटी गाविस हो । सात महिनाअघि सामाखुसी चोकमा रहेको डेल्टा इम्प्लोइमेन्ट म्यानपावरमार्फत मलेसिया आएको थिएँ । मैले पैसा बुझाएको एजेन्ट टिकाराम गोपाजुको दोलखा चरिकोटमा कार्यालय छ । मैले उहाँलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएको थिएँ । फेरी त्यहि म्यानपावरको अर्को एजेन्ट सारदाकुमार अधिकारीले पैसा बुझाएको छैन तलवबाट काट्नु भनेर मलेसियाको अफिसमा इमेल पठाएका रहेछन् । प्रत्येक महिना मेरो तलवबाट ५ सय रिंगेट काट्यो । मैले धेरै पटक फोन गरेर मेरो तलव किन काटेको भनेर कुरा राखें । सारदाले इमेल गर्दा... पुरा पढ्नुहोस
साउदीबाट मलाई किन नेपाल फर्काइयो ? मेरो घर काठमाडौं कपन हो । वालुवाटारको एक डेरिमा झण्डै २२ हजार रुपैयाँको जागिर थियो । तर विदेशमा अझै कमाइएला भनेर त्यो जागिर छाडेर म रोजगारीका लागि केहि महिना अघि साउदी पुगें । काठमाडौंको बालाजुमा रहेको व्लुस्काई म्यानपावरमा १५ हजार तिरेर म साउदि पुगेको थिएँ । साउदीको युनाइटेड नेश्नल डेरिमा लेवर भिसामा गएको थिएँ । तर मैले त्यो डेरीमा एसी टेक्नीसियनको काम पाउँछु भन्ने आश थियो । कातिक अन्तीम साता साउदी पुगेपछि मैले गाईफार्ममा गाई दुहुने काम सुरु गरेँ । त्यो काम गर्न साह्रै गाह्रो रहेछ । मैले सक्दीन... पुरा पढ्नुहोस
​मलेसिया आउनु पहिले यी कुरा बिचार गर्नुस् म गएको ६/७ वर्षदेखि मलेसियाको क्वालालम्पुरमा कार्यरत छु । मलेसिया आउँदा आवश्यक कुरा बुझेर र राम्रो कम्पनीमा मात्रै आउनुहोला । भरसक मलेसिया नआउँदा पनि हुन्छ । यहाँ आइसकेपछि धेरै समस्यासँग भिड्ने तरखरमा आउँदा हुन्छ । कम्पनी जाँदा र कम्पनीबाट फर्किँदा, बजार जाँदा होस् या घुम्न वा काम गर्न जाँदा सकभर एक्लै हिड्न उपयुुक्त छैन । यहाँ नयाँ मान्छे जो कोहीबाट पनि लुटिने खतरा हुन्छ । सुरक्षा दिन बसेका प्रहरीबाट पनि लुटिएका छन् । कतिपय त नेपालीबाटै पनि लुटिएका छन् । तपाईंले नचिनेको मान्छेले बोलायो भ... पुरा पढ्नुहोस
सीप भयो भने विदेशमा राम्रो काम र कमाई मेरो घर सोलुखुम्बुको लोखिम–८ हो । पहिले रोजगारी खोज्दै कतार गएको थिएँ । घरमा बुबा आमा हुनुहुन्छ । हामी छ दाजु–भाइ र एक बहिनी । बुबा आमाले गरेको खेतीपातीकै आम्दानीले हामीले पढ्यौं । संकटकालको समयमा गाउँमा बस्न गाह्रो भयो । कहिले सेना, प्रहरीले त कहिले माओवादिले गाउँमा दुःख दिन थाले । साथीहरु कोहि गाउँ छाडेर भाग्न थाले । कतिपय माओवादीमा गए र कतिपय सेना प्रहरीमा जागिर खान थाले । सेना प्रहरीमा जागिर खान आफूसँग केहि पनि आधार भएन । मैले विदेश जाने निर्णय गरेर पासपोर्ट बनाएँ । काठमाड... पुरा पढ्नुहोस
आठ वर्ष साउदी बस्दा ५० लाखको जमिन जोडें, अब छोरीलाई डाक्टर बनाउने सपना छ मैले साउदी अरबमा काम गर्न थालेको आठ वर्ष भन्दा धेरै समय भइसक्यो । तीन पटक त विदामा गएर फर्कें । पहिला २० रुपैयाँ सापटी माग्दा कसैले पत्याउँदैनथे । अहिले गाउँमा सबैको हाइ हाइ भइएको छ । घर पनि राम्रै बनाएको छु । छोराछोरी पनि राम्रोसँग पढ्दै छन । २०५७ सालको एसएलसी परीक्षामा राम्रै अंक ल्याएर पास गरेको हुँ । कलेज इलाम मङलबारेको प्रगती उच्च माविमा पढन थालें । त्यतिबेला दाईहरु विवाह गरेर अलग भइसकेका थिए । घरमा बाबुआमा, भाई र म मात्रै थियौं । घरको अवस्थाका कारण मेरो विवाह गर्ने कुरा चल्न थाल्यो । मैले... पुरा पढ्नुहोस
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा अझै पनि दलालकै विगविगी म युएईमा छु । सन् २००९ देखि म विदेशमा नै कार्यरत छु । मैले काम गर्ने कम्पनीको म्यानेजरलाई मेरो भाइलाई भिसा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दा उनले कामदारको अन्तर्वार्ताका लागि नेपाल जाने कुरा बताए । नेपाल गएपछि सुरा सुन्दरीसँग मोजमस्तीका लागि म्यानपावर कम्पनीले नै निःशुल्क व्यवस्था गरिदिने भएकाले बरु भाइलाई काठमाडौं पठाइदिन भने । मैले बुझेको कुरा विदेशका रोजगारदाता कम्पनीले कानून अनुसार श्रमिकको माग गर्छन् । तर सोही कम्पनीमा माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु कमिसनमा पल्किएका हुन्छन् । कमिसन नदिए न... पुरा पढ्नुहोस
मलेसिया नआएकै राम्रो मेरो नाम अजय भुसाल हो । घर बर्दिया जिल्लाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिण तर्फ महेन्द्र राजमार्गले छोएको धधवार गा.वि.स. को वडा नं. ६ बनगाईमा पर्छ । मेरो परिवार पर्वतबाट बसाई सरेर ०४६ सालमा बर्दिया आएको हो । त्यो बेलादेखि हालसम्म हामी त्यही बसोबास गर्दै आएका छौं । म बर्दियामै जन्मेको हुँ । मेरो बाल्यकाल र किशोर अवस्था बर्दिया मै वित्यो । बर्दियाको जनज्योति मावि र जनसेवा उच्च माध्यमिक तहमा पढेपछि मैले वुटवलको लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसमा अध्ययन गर्न थाले । त्यहा ४ बर्ष पढेपछि मैले नेपालमा का... पुरा पढ्नुहोस
इजरायल इजरायल भूमध्य सागरको पूर्वी किनारमा रहेको घना जनसंख्या भएको देश हो । संसारमा यहुदीहरुको बहुमत ... थप जानकारी